Bug rinokonzeresa kunonoka muMessage yeHigh Sierra inoenderera | Ndinobva mac
Tsaona inokonzera kunonoka muMessage yeHigh Sierra inoenderera
Sezvo macOS High Sierra yakaburitswa mwedzi mishoma yapfuura, Bug yakawanikwa yakakonzera kuti vamwe vashandisi vaone kunonoka kukuru mukugamuchira uye kutumira mameseji, pamwe nekushayikwa kwezaziso pane mamwe madivayiri.
Sezvinei, kusvika parizvino kutadza kunoramba kuripo muvashandisi ava, zvisinei nekugadziridzwa kwakazoburitswa neApple. Iwo maforamu eiyo brand utsi nevatengi vanogunun'una nezvekushaikwa kwekubudirira nekambani kugadzirisa dambudziko risiri rakaomarara pakutanga kuona.
Mushure mekusimudzira komputa kuenda kuMacOS High Sierra, vamwe vashandisi vakaona kuti iMessages yakasara zvakanyanya paMacs avo. Zvakare, apo komputa yavo yaive ichimhanya, Notifications dzakadzimisirwa pamamwe madivayiri akabatana neiyo iCloud account, senge yavo iPhone uye Apple Watch.
Nekuda kweichi chirwere, mameseji akanonoka kunyangwe maawa kubva pakutumwa kwemessage kwekutanga. Mazhinji maforamu akatumira ekugadzirisa ekugadzirisa dambudziko, kusanganisira kuremadza meseji, uye nekuzozvimisazve. Nekudaro, zvinoita sekunge vasingagadzirise dambudziko uye mhosho inoonekwa zvakare.
La "Mhinduro yakasimba kwazvo" kugadzirisa dambudziko iri, ndiko kudzorera Mac yako kuiyo yapfuura vhezheni, Sierra, kana kudzima zvachose kugamuchirwa kwemameseji pakombuta yako.
Iyo bhaggi inoita kunge inofambidzana nechinhu chitsva cheMacOS High Sierra, mairi iyo inobvumidza kuwiriranisa kweMessages muICloud. Betas yechinhu chitsva ichi chakaunzwa asi inozopedzisira yaburitswa imwe nguva kudonha uku.
Uye kwauri, dambudziko iri raitika kwauri neMac yako here? Kana zvirizvo, tiudze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Tsaona inokonzera kunonoka muMessage yeHigh Sierra inoenderera
Carlos Akanaka akadaro
Mhoroi, ndanga ndiri mushandisi wemapuro kwemakore akati wandei. Ndinoziva maitiro ekufunga nezvekumisikidza iMessage uye FaceTime pane ese Mac uye iPhone. Ndanga ndiine matambudziko kweinenge mwedzi mitanhatu yandisingakwanise kushandisa iwo maapp. Nhasi 6APR13, ndaita maitiro mazhinji (zvakadzama) kugadzirisa iko kukanganisa uye hapana, ndakaedza kugadzira id itsva yeapuro uye hapana, kuseta iyo PRAM uye hapana, pinda neimwe id (yehama isinga matambudziko aripo) uye hapana. Ini handikwanise kutumira mameseji kana FaceTime, kunyangwe paine nhamba yangu yefoni yakagadzirirwa.
Kana paine chero munhu anoziva nezve zvimwe zvikonzero, ndingafarire kutaura neni, maita basa kwazvo.
Pindura Carlos Bueno
CarPlay rave kudikanwa kune vazhinji vashandisi
Mutambo mutsva weSolitaire unoonekwa paMac App Store